ဂေါ်မိတ် သည် စိန်ကိုတုပနိုင်လောက်အောင် ရောင်လက်အား/မီးအားကောင်းလှသည့် တွင်းထွက်ဖြစ်သည်။ မြန်မာတို့ နဝရတ် ကိုးပါးစာရင်းဝင် အဖြစ်နားလည်ကြသည်။ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုမှာ ဇာဂွန်နီယံဆီလီကိတ် ဖြစ်ပြီး မာဆင့် ၇ မှ ၇.၅ ရှိသည်။ ရောင်လက်မှာ ဆီရောင်လက် မှ စိန်ရောင် ...
နီလာ သည် ပတ္တမြားနည်းတူ ကိုရမ်ဒမ် ဒြပ်ပေါင်း ပင်ဖြစ်ပြီး တိုက်တေနီယံ ဒြပ်စင်အနည်းငယ် ပါဝင်သောကြောင့် အရောင် နှင့် ဖွဲ့စည်းမှုပုံသဏ္ဍန် ကွဲပြားသွားရခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံဆောင်စနစ်မှာ ပတ္တမြား ကဲ့သို့ပင် တြိဂုဏ်စနစ် ဖြစ်ပြီး ပတ္တမြားနှင့် အပြင်ပန်းပုံသဏ ...
ကျောက်တိမ်းရည် အနီတွင် အပြာရည်လွန်သော အရောင်မျိုးကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လည်သီးရည် ကြက်ဖလည်ပင်းမှထွက်သော သွေးအရောင်၊ အနီရောင်အပြည့်ရှိသည့် ပတ္တမြားကျောက်ကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထုံးခြောက်ရည် နီသော်လည်း ဖြူပြီး ခြောက်တောက်တောက် ဖြစ်နေသော အရောင်မျိုးကိ ...
ပယင်း သည် ဇီဝမူလ ကျောက်မျက် အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ တိကျသော ဓါတုဖွဲ့စည်းမှုသော်လည်းကောင်း၊ ပုံဆောင်စနစ်သော်လည်းကောင်း မရှိပေ။ ဓါတုဖွဲ့စည်းမှုအားဖြင့် ဟိုက်ဒရို-ကာဘွန်နိတ် ဒြပ်ပေါင်းများပင်ဖြစ်သည်။ သိပ်သည်းဆ ၁.၀၇၊ မာဆင့် ၂.၅ သာရှိသောကြောင့် မီးအပူဒဏ်နှ ...
Painiteဟု အမည်ရပြီး ကမ္ဘာ့အရှားပါး ဆုံး ကျောက်မျက်ရတနာ ၁ဝမျိုး စာရင်းထဲမှာ အဆင့် ၅ ဝင်သော ကျောက်မျက်ရတနာ တစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သူမှာ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး သတ္တုဗေဒ ပညာရှင် Arthur C.D.Pain ဖြစ်သည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်နောင်းပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံ အ ...
ပုလဲ သည် ပင်လယ်အတွင်း နေထိုင်သော ကမာ မုတ်ကောင်၏ ကိုယ်တွင်းမှ ရရှိသော အရာဖြစ်သည်။ တွင်းထွက် ကျောက်မျက် မဟုတ်ပေ။ ပုလဲကို မြန်မာလူမျိုးတို့က နဝရတ်ကိုးပါးတွင် ပါဝင်သော ရတနာတစ်ပါး အဖြစ် အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထား ဝတ်ဆင်ကြပါသည်။ နဝရတ် ကိုးပါးစလုံးတွင် တစ်ခု ...
ပြောင်ခေါင်းစိမ်း သည် အရည်အသွေးပေါ်မူတည်၍ ဈေးနှုန်းကွာဟချက်ကြီးမားတတ်သည့် ကျောက်မျက်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ မိုးကုတ်မြို့ အနောက်ဖက် ပြောင်ခေါင်းရွာမှ ပေါများစွာထွက်ရှိသည်ကို အကြောင်းပြု၍ မြန်မာတို့က ပြောင်ခေါင်းစိမ်းဟု ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အနောက်တိုင ...
မြ သည် မျက်ရွှဲ ဘယ်ရယ် အုပ်စုဝင် တွင်းထွက်ကျောက် အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းမှုအားဖြင့် ဘယ်ရယ်လီယံ အလူမီနီယံ ဆီလီကိတ် တွင် ခရိုမီယံဒြပ်စင် အနည်းငယ် ပါဝင်နေခြင်းဖြစ်ပြီး မာဆင့်အားဖြင့် ၇.၅ ရှိပါသည်။ သိပ်သည်းဆ ၂.၇၁ ရှိကြပြီး ဖန်ရောင်လ ...
မြ-မျက်ရွဲ အုပ်စုဘယ်ရယ် အုပ်စုဝင် တွင်းထွက်နှင့် ကျော်မျက်များဆိုသည်မှာ အခြေခံအားဖြင့် ဘယ်ရယ်လီယံ အလူမီနီယံ ဒြပ်ပေါင်းပေါ်တွင် အခြေခံထားသည့် တွင်းထွက်အုပ်စုတစ်မျိုးကို ဆိုလိုပါသည်။ ထို ဘယ်ရယ်လီယံ နှင့် အလူမီနီယံတို့ နှစ်ခု၏ ပါဝင်သော အချိုးအစားကြေ ...
မျက်ရွဲ သည် မြ-မျက်ရွဲ အုပ်စုဘယ်ရယ် အုပ်စုဝင် တွင်းထွက်ဖြစ်သည်။ မြကဲ့သို့ပင် ဆဌဂုဏ်ပုံဆောင် စနစ်ဖြစ်ပြီး မာဆင့်မှာ ရ.၅ မှ ၈ အထိရှိသည်။ ရောင်လက်မှာ ဖန်ရောင်လက်ဖြစ်၍ သိပ်သည်းဆမှာ ၂.၆၇ မှ ၂.၇၈ ထိရှိသည်။
မြန်မာတို့ အခေါ်အားဖြင့် မြစစ်ကိရိယာ ခေါ် ချဲလ်ဆီးရောင်စစ်ကိရိယာ သည် ကျောက်မျက်ရတနာတို့၏အရည်အသွေးကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အသုံးဝင်သည် ကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် သဘာဝမြ နှင့် ချက်ကျောက်မြ၊ ဆေးဆိုးကျောက်မျက်အချို့ကို ခွဲခြားရာတွင် အလွန်အသုံးဝင်ပ ...
ကျောက်မျက် ရတနာဖြစ်လာမည့် တွင်းထွက်ကျောက်များဖြစ်မလာသေးသော စတင်ဖွဲ့စည်းစအချိန်က ထိုကျောက်ချော်ရည်အတွင်းသို့ အစိုင်အခဲ ၊ အရည် အငွေ့တို့သည် လှောင်ပိတ်မိသွားမိခဲ့ခြင်းဖြင့် အောင်းဝင်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ သို့ဖြင့် ကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခု တွင်းထွက်ကျောက်တစ ...
အလင်းသန့် ကိရိယာ ပိုလာရီစကုတ် သည် ကျောက်မျက်ရတနာတို့ကို အမျိုးအစားခွဲခြား စစ်ဆေးရာတွင် ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည့် ကိရိယာဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံသဘောတရားအားဖြင့် ကျောက်မျက်တစ်မျိုးချင်းစီတွင်ရှိသည့် မတူညီသော အလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်းနှင့် ပုံဆောင်စနစ်တို့က ...
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ဆာရီနယ်အတွင်းရှိ ကျူးရွာတွင် ကျူးဂါးဒင်းခေါ် ကမ္ဘာကျော်ဘုရင့် ရုက္ခဗေဒ ဥယျာဉ် ရှိ၏။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ လှည့်လည်သူမှန်သမျှ ထိုနေရာသို့ ရောက်လျှင် ကျူးဂါးဒင်းသို့ သွားရောက်မကြည့်သူ မရှိချေ။ သို့ဖြစ်ရာ ကျူးဂါးဒင်းသည် ကြည့်ရှုသူများနှင့ ...
သူတို့က ပေါက်တော့မယ့်မြွေနဲ့ တူရင်တူမယ်။ ဒါပေမယ့် Cobra Lilies တွေကို လိုက်လံသတ်ဖြတ်စားသောက်တတ်တဲ့ အကောင်တွေတော့မဟုတ်ဘူး။ သားကောင်တွေကို ကိုယ့်ဆီ ညှို့ငင်ယူကာ သတ်ဖြတ်စားတဲ့အပင်မျိုးဖြစ်တယ်။ ဒီအသားစားအပင်တွေဟာ အခြားအပင်တွေပေါက်နိုင်တဲ့ Serpentine ...
စပိန်လူမျိုးများ အမေရိကတိုက်သို့ ဦးစွာရောက်စဉ်က မက္ကဆီကိုနယ်မှ တိုင်းရင်းသားတို့သည် ကကေးအိုပင်မှ ရသော အစေ့မှုန်ဖြင့် ဖျော်ထားသည့် အရည်ခါးခါးကိုသောက်သုံးလျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ထိုတိုင်းရင်းသားတို့က ဤအရည်ခါးကို ချောကလက်ဟုခေါ်၍ ကကေးအိုပင်မှ ရကြောင ...
စားတော်ပဲခန့်ရှိ တစ်စေ့သီး ဖြစ်သည်။ အဖြူ သို့မဟုတ် အနီရောင်ဖြစ်၏ ။ မှည့်သောအခါ ခရမ်းရောင်ရှိသည်။ တပေါင်းလ၊ တန်ခူးလတွင် သီးသည်။
ရုက္ခဗေဒအလိုအားဖြင့် Acacia concinna ဟုခေါ်သောအပင်မှာ ကင်ပွန်းပင် ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအပင်ကို ကင်ပွန်းချဉ်၊ ဆူးပုပ်ဟုလည်းခေါ်ကြသေးသည်။ မျိုးစိတ်ပေါင်း ၅၅ဝ မျှရှိပြီး ကမ္ဘာ တဝှမ်းလုံးရှိနွေးသောဒေသများတွင် ပေါက်ရောက်လေ့ရှိသည်။ အရွက်များမှာရွက်ပေါင်းဖြစ် ...
ကစော့ပုပ် သည် နေရာဒေသမရွေး ပေါက်တတ်သော အပင်ငယ်တမျိုး ဖြစ်သည်။ မိုးဥတု၌ ထူးထူးခြားခြား ပေါက်တတ်သည်။ အမြစ်သေး၏။ ပင်လုံးမှာ တပင်လုံး အနေနှင့် ခြုံကြည့်သော် ခပ်ဝိုင်းဝိုင်းနေ၍ ရွက်ဆိုင်ထွက်၏။ အရွက်သည် ဝိုင်း၍ အဖျားရှူးသွားသည်။ ဒန်ကျွဲပင်နှင့် ပုံသဏ္ဌ ...
ကဇန်းပင်ကို တောင်သပေါ့ပင် ၊ ကဇောင်းပင် ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ အင်္ဂလိပ်အမည်မှာ urchin-fruited pandan/ thatch screwpine/ scrub breadfruit/ mat palm ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံအမည် မျိုးရင်းမှာ Benstonea monticola Callm. & Burki. ဖြစ်သည်။ လက်တင်ဘာသာအရ Benstonea ဆို ...
ကညင်ပင်မျိုးတွင် ကညင်နီ၊ ကညင်ဖြူ၊ ကညင်ပြန်၊ ကညင်ကုပ်၊ ကညင်ကြောင်ချေး၊ ကညင်ဝက်တောင်း ဟူ၍ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားလျက်ရှိသောကြောင့် အပင်ကိုလည်းကောင်း၊ ခွဲစိတ်ပြီး ကညင်သားကိုလည်းကောင်း မြင်ရုံမျှဖြင့် မည်သည့် ကညင်ပင်မျိုး ဖြစ်သည်ကို တိကျစွာ ခွဲခြားသိနိုင ...
အပင်ကြီးမျိုးဖြစ်ပြီး ပေ ၄၀ခန့်မှ ပေ ၁၀၀ ခန့်အထိ တွေ့ရသည်။ ကညင်ဖြူနှင့် ကညင်နီတို့ ပေါက်ရောက်ပုံချင်း မထူးခြားလှသော်လည်း ကညင်နီမှာ ကညင်ဖြူထက် အရွက်ပိုငယ်သည်။ အရွက်၏ အရောင်၊ အခေါက် နှင့် အသားအရောင်တို့ပေါ် မူတည်၍ အဖြူအနီ ကွဲပြားသည်။ အဖြူမျိုးသည် မ ...
အထက်မြန်မာပြည်တွင် အတွေ့ရနည်းသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စွတ်စိုထိုင်းမှိုင်းသော အရပ်ဒေသတွင်ပေါက်ရောက်သည်။ တောင်ပေါ်ဒေသနှင့် အေးသော အရပ်များတွင် စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်သည်။ သဘာ၀အလျောက် ပေါက်ရောက်သော်လည်း စားသုံးရန်အတွက် စိုက်ပျိုးကြသည်။
ကတွတ်ပင် သည် ညောင်ပင်မျိုးတွင် ပါဝင်၍ အမြဲစိမ်းလန်းကာ ချုံဖုတ်အကြီးစားကဲ့သို့ တည်ရှိသည်။ အင်္ဂလိပ်အမည်မှာ Fig tree ဖြစ်ပြီး မျိုးစု မှာ Figus ဖြစ်သည်။ မျိုးစိတ် မှာ cunia ဖြစ်ပြီး မျိုးရင်း မှာ Moraceae ဖြစ်သည်။ အခေါက်၊ အရွက်၊ အသီးနှင့်တကွ တပင်လု ...
အပင်သည် အမြဲစိမ်းပင်လတ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အမြင့် ၁၅ပေမှ ပေ ၂၀ အထိရှိသည်။ ပင်စည်အခေါက် ညိုပြာပြာရောင်ရှိ၍ ချော၏။ အရွက်မှာ ရွက်လွှဲထွက်သည်။ ဘဲဥပုံသဏ္ဌာန် ရှိ၍ အဖျားချွန်သည်။ အရင်းဝိုင်း သို့ အနည်းငယ် သွယ်သည်။ ရွက်ပြားပြောင်ချော၍ ရွက်ကြောထင်ရှားသည်။ ရွက ...
ကနစိုးပင် သည် အမြဲစိမ်းပင်မျိုးဖြစ်၍ အထက်နှင့် အောက်မြန်မာပြည် မိုးများသော ဒေသများတွင် ပေါက်သည်။ အရွယ်မှာ အလတ်စားမျိုးဖြစ်သဖြင့် အမြင့်ပေ ၄ဝ မှ ၅ဝ အထိ၊ ပင်စည်လုံး ပတ် ၃ ပေမှ ၅ ပေအထိသာ ရှိကြ သည်။ ကနစိုးသား၏ အရောင်မှာညို၍ အသင့်အတင့် မာ သည်။ တပို့တွ ...
Botany Term: Enhydra fluctuans Lour Species/Family: Compositae အလွန်သေးငယ်သော အရပ်ဒေသများမှအပ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြား ရေချိုပိုင်း ရေစပ်များတွင် ပေါက်ရောက်သည်။ သဘာ၀အလျောက် အလေ့ကျပေါက်သည်။ ရခိုင်လူမျိုးများသည် ကနဖော့ ကို ခေါင်းရော် ဟုခေါ်ကြသည်။
Botany Term: Plumbago rosea Linn Species/Family: Plumbaginaceae ပုံသဏ္ဌာန်: အပင် နှစ်ကြာခံ ပင်ပျော့ ၊ နွယ်ယောင် ပင်ယောင် မျိုး ဖြစ်သည်။ အထက်ဘက်သို့ ကိုင်းဖြာသည်။ အဆစ်များရှိသည်။ ၂ ပေ မှ ၃ ပေထိ မြင့်သည်။ အရွက် ရွက်လွှဲထွက်သည်။ ရွက်ထိပ်ချွန်၍ ရွက်ရ ...
Botany Term: Plumbago zeylanica Linn Species/Family: Plumbaginaceae ပုံသဏ္ဌာန်: အပင် နှစ်ကြာခံ သစ်ပျော့ပင်မျိုးဖြစ်၍ နွယ်ယောင်ပင်ယောင်ဖြစ်သည်။ ၂ ပေမှ ၄ ပေ ထိ မြင့်သည်။ ပင်စည်ပေါ်တွင် အစင်းကြောင်းကလေးများရှိ၍ အမွေးမဲ့သည်။ အရွက် ရွက်လွှဲထွက်သည်။ ရွ ...
Species/Family: Convolvulaceae Botany Term: Ipomaea aquatica Forsk ပုံသဏ္ဌာန်: အပင် တစ်နှစ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြာခံ ရေလျှောက်ပင် ဖြစ်သည်။ ပင်စည်ရိုးနီ၍ ခေါင်းပွဖြစ်၏ ။ အဆစ် များမှ အမြစ်များ ထွက်သည်။ အဆစ်နေရာတွင် အခေါင်းပိတ်ဖြစ်သည်။ အရွက် ရွက်လွှဲထွက် ...
ကန်းဇော်ပင် သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်ခရိုင်အတွင်းရှိ မြိတ်မြို့နယ်၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ ပုလောမြို့နယ် များ၌ မြေနိမ့်ချိုမ့်ဝှမ်း၊ ရွှံ့နွံပေါ၍ ရေရရှိသော ဒေသများတွင် အများအားဖြင့် ပေါက်ရောက်သည်။ အပင်အရွယ်အစားမှာ အပင်ကြီး မ ...
မိုးရာသီတွင် ပေါက်တတ်သော အပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ တစ်ပေခွဲ မှ သုံးပေခွဲအထိ မြင့်တတ်ပြီး အရွက်မှာ ၁ လက်မခန့်အထိ ရှည်ပြီး ၁ လက်မခန့် ကျယ်သည်။ သေးသော အမွှေးအမျှင်ကလေးများ ရှိသည်။ အပွင့်ဝါပြီး အဆုတ်လိုက် ပွင့်သည်။ အသီးသည် ကုလားပဲလုံးနှင့် တူသော်လည်း ထိုထက် ...
အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၍ ရေငံတက်သော ပင်လယ်ကမ်းခြေတလျှောက် ပေါက်တတ်သည်။ အရွက်ရှည်၍ လုံး၏။ အနားကွဲ၏။ အခေါက်နီ၏။ ဆိုးဆေး အဖြစ်ဖြင့် အသုံးဝင်၏။ အသားမှာ လိမ္မော်ရောင်ရှိ၍ ခိုင်မာသဖြင့် အိမ်တိုင်၊ ယက်မ၊ ထုပ်၊ လျှောက်၊ ဒိုင်း၊ မြား စသည်တို့ အပြင် ထင်းနှင့် မီ ...
Botany Term: Mansonia gagei Drummond Species/Family: Sterculiaceae ပုံသဏ္ဌာန်: အပင် - အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ အမြင့်ပေ ၄၀ ၊ လုံးပတ် ၄-၈ ပေ ရှိသည်။ အခေါက်အညိုရောင်ပေါ်တွင် အဖြူရောင်ရောနေပြီး မာကြောသော အနှစ်ပါရှိသည်။ အသားစိုတွင် မွှေးကြိုင်သောအနံ့ လ ...
ကရဝေးပင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြား၌ ပေါက်သော်လည်း တနင်္သာရီတောင်ပိုင်းတွင်သာ အမြောက် အမြား တွေ့ရသည်။ ဤအပင်သည် သစ်ကြမ်းပိုးမျိုးဝင် အပင် တစ်မျိုးဖြစ်၍၊ သစ်ကြမ်းပိုးပင်နှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူသည်။ အမြင့်မှာ ပေ ၃ဝ မှ ၄ဝ အထိ ရှိ၏။ အထက်မြန်မာပြည် တောင်ကုန် ...
ကလိုဗါပဲပင်သည် ပဲလုံးမျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ အယ်လဖါးဖါးကဲ့သို့ ကျွဲနွားစာအတွက်နှင့် လယ်ခင်းများ မြေဩဇာ ထက်သန်လာစေရန်အတွက် စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကလိုဗါပဲပင် မျိုးစိတ်ပေါင်း ၄ဝဝ ကျော်မျှရှိ၍ ဥရောပတိုက် နှင့် မြောက်အမေရိကတိုက် သမပိုင်းဒေသများတွင် ကောင်းစွာ ...
ကလောပင်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ကလော ခိုပင်ဟူ၍၎င်း အမည်တွင်သည့် အပင်တစ်မျိုးကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမြဲစိမ်းတောများတွင်တွေ့မြင်ရသည်။ အပင်အရွယ်မှာ အလတ်စားမှ အကြီးစားအထိရှိသည်။ ကလောပင်၏ ရုက္ခှဗေဒအမည်မှာ တရက်တိုဂျီးနိုး ကာဇိုင်း ဖြစ်၏။ ချေးပင်နှင့် ကလောပင်တို့၏ ...
ကသစ်ပင် တွင် ပင်လယ်ကသစ်ပင်၊ ရေကသစ်၊ ကုန်းကသစ်၊ တောင်ကသစ် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ရှိရာ၊ ယင်းတို့အနက် ပင်လယ်ကသစ်မှာ သစ်ကြီးခုနစ်ပင်တွင်ပါဝင်၍ တာဝတိံသာ၏ အထိမ်းအမှတ် ဖြစ်သဖြင့် ထင်ရှားသော အပင်ဖြစ်လေသည်။ နွယ်ပင်ဖြစ်သော ကသစ်မှတပါး ကျန် ကသစ်မျိုးဝင် အပင် ...
ကာကျုပွတ်ပင် သည် အရှေ့အိန္ဒိယကျွန်းစု၊ ပသျှူးကျွန်းဆွယ်နှင့် ဩစတြေးလီးယားတိုက် အပူပိုင်း ဒေသ များ၌ပေါက်သော သစ်ပင်တစ်မျိုးဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြိတ် နယ်၌ တွေ့ရသည်။ ကလန်ပင် ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြသည်။ ဤအပင်၏အရွက်မှ ဆေးဖက်ဝင်သည့် ကာကျုပွတ်ဆီ သို့မဟုတ် ကာပ ...
ကုလားကင်ပွန်း သည် အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်ပြီး ပေ၂၀ မှ ၃၀ အထိ မြင့်သည်။ အညာဒေသတွင် အများဆုံး ပေါက်ရောက်သည့် ၎င်း၏ အရွက်သည် ရွက်ဆိုင် ထွက်သည်။ အပွင့်သည် ဖြူပြီး အဆုပ်လိုက် ပွင့်သည်။ တန်ဆောင်မုန်းမှ တန်ခူးအထိ ၆ လ တစ်ကြိမ် အသီးသီးကာ အပွင့်ပွင့်လျှင် ပိတော ...
ကုလားပိတောက် ပင်မှာ ပေ ၆၀ ခန့်မြင့်ပြီး လုံးပတ်မှာ ၆ ပေမှ ၁၂ ပေခန့် ရှိသည်။ အကိုင်းများသည် အောက်သို့ ကိုင်းညွှတ်၍ တွဲလွဲ ကျဆင်းနေတတ်သည်။ အမွှေးနုကလေးများ ရှိသည်။ အခေါက်မှာ ၁ လက်မခန့် ထူ၍ အနည်းငယ် အဝါရောင်သန်းပြီး ပြာနှမ်းနှမ်း ရှိသည်။ အရွက်မှာ ဝိ ...
Botany Term: Cardiospermum halicocabum Linn Species/Family: Sapindaceae ပုံသဏ္ဌာန်: ပုံသဏ္ဌာန်- အပင် - တစ်နှစ်ခံအပင်နှင့် နှစ်နှစ်ခံပင်နှစ်မျိုးရှိသည်။ နှာမောင်းဖြင့် နွယ်တက်သည်။ အကိုင်းများသေးသွယ်၍ အစင်းများရှိသည်။ အမွေးပါးဖုံးလွှမ်းနေသည်။ သို့မ ...
ကူးသန်းပင် သည် အထက်နှင့် အောက် မြန်မာပြည် မိုးပါးသောဒေသများတွင်ပေါက်သော တောသစ်ပင်ကြီး တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အမြင့်ပေ ၈ဝ မှ ၉ဝ အထိ၊ ပင်စည်လုံးပတ် ၇ ပေမှ ၈ ပေအထိရှိ၍ အများအားဖြင့် ဖြောင့်မတ် ရှည်လျားသည်။ သစ်သား၏အရောင်မှာမွဲပြာ၍ အသားပွကာ ကြမ်းသယောင် ရှိသ ...
Botany Term: Convolvulus arvensis Linn Species/Family: Convolvulaceae ပုံသဏ္ဌာန်: အပင် - နွယ်ပင်ဖြစ်၍ ပင်စည် ပြောင်ချောသည်။ အချို့အမွေး အနည်းငယ်ရှိသည်။ ဖြတ်ကြည့်က ဖြူသော အစေးများ ထွက်သည်။ အရွက် - သေးသွယ်ရှည်လျားပြီး အရင်းဝိုင်း၍ အဖျားချွန်သည်။ ၁- ...
ကော်စေးပင် များ၏ ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ အမည်မှာ ပါလေကွီယမ် အော့ဗလောင်းဂျီဖိုးလီးယားဖြစ်၍ ဆက်ပိုတေစီးမျိုးစဉ် တွင် ပါဝင်သည်။ ထိုသစ်ပင်မျိုးမှာ မိုး များစွာ ရွာသွန်းသော မလ္လာယုကျွန်းဆွယ်နှင့် ထိုဒေသအနီး တစ်ဝိုက်ရှိ ကျွန်းများတွင် ပေါက်ရောက်သည်။ အသားမှာ ပွ ...
ကျည်းပင်သည် တွဲလျားကျနေသော ညှာတံရှည်တွင် ပွင့်လေ့သီးလေ့ရှိသော အပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ အမြဲစိမ်း သစ်ပင် ပင်လတ်မျိုးဖြစ်၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မလ္လာယုကျွန်း ဆွယ်နှင့် ဩစတြေးလီးယားတိုက် မြောက်ပိုင်းတို့တွင် ပေါက် သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိုထိုင် ...
ကျည်းလံပင် ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် မဲဇာမြစ်ဝှမ်း၌ တွေ့ရ သည်။ ဤအပင်သည် အလွန်ကြီးမားသော တောသစ်ပင်ကြီး မျိုးဖြစ်၍ အမြင့်ပေ ၁ဝဝ အထိ ပင်စည်လုံးပတ် ၁ဝ ပေမှ ၁၂ ပေအထိ ရှိတတ်သည်။ အဖျားပိုင်း၌သာ အကိုင်းအခက် များ ထိုးထွက်လျက်ရှိသဖြင့် ပင်စည်လုံးသည် အကိုင်းအခက ...
ကျီးပေါင်းသည် အခြားသစ်ပင်၏ ပင်စည်နှင့် အကိုင်း အခက်များပေါ်တွင် တွယ်ကပ်မှီခို၍ ရှင်သန်ကြီးပွားရသော ချုံပင်မျိုးဖြစ်သဖြင့်၊ အပင်လောက၌ အလွန်ထူးဆန်းသော အပင်ဟု ဆိုရပေမည်။ ကျီး ပေါင်းသီးတို့ကို ကျေးငှက်များ ကိုက်ချီစားသောက်ယင်း သစ်တစ်ပင်မှ တစ်ပင်သို့ ...
Species/Family: Cucurbitaceae Botany Term: Trichosanthes palmata Roxb ပုံသဏ္ဌာန်: အပင် နွယ်ပင်ကြီးမျိုးဖြစ်သည်။ ပင်စည်သန်မာ၍ အောက်ပိုင်း၌ သစ်မာဖြစ်သည်။ အကိုင်းဖြာသည်။ မြောင်းပါသည်။ ရင့်သော ပင်စည်သည် မွဲခြောက်ခြောက်အရောင်ဖြစ်ပြီး ကြမ်းသော အပြောက်အ ...